LG Q52 bụ ntinye ọhụụ ọhụrụ na Helio P35 na gam akporo 10 | Gam akporosis
LG na-ekwuputa ọkwa Q52 ọhụrụ, smartphone dị nnọọ ka LG K52 webatara n'oge na-adịbeghị anya, K52 ghọrọ mara ọkwa n'akụkụ LG K62. na LG Q52 ghọrọ ọkwa ama ama ntinye gosipụtara ahịa mpaghara na ọnụahịa akwụ ụgwọ maka ihe ngwaọrụ ahụ gụnyere.
Companylọ ọrụ ahụ ekwuola na ọ na-atụ anya ịnọgide na-arụpụta ihe nrụpụta iji nye ndị ọrụ ahụmịhe kachasị mma mgbe ị na-eji ekwentị. Ọ na - abụ ụdị dị iche iche nke ndị dị adị ma LG chọrọ ịmalite ya n'oge na - adịghị anya na Europe dịka o mere na ekwentị ndị ọzọ.
1 LG Q52, ihe niile gbasara ekwentị ọhụrụ
2 Igwefoto anọ na ọtụtụ njikọta
LG Q52, ihe niile gbasara ekwentị ọhụrụ
LG etinyela ihuenyo 52 nke anụ ọhịa ahụ na Q6,6 site na mkpebi HD +, na nke a, ihuenyo ahụ na-enye nha 20: 9 na n'ụzọ mikpuru, naanị otu bụ obere bezel dị ntakịrị nke nwere ekwentị. Igwefoto ihu a họọrọ bụ ihe mmetụta 13 megapixel ma nye gị ohere ịse foto yana vidiyo dị mma.
LG Q52 kpebiri na mgbawa MediaTek, kpọmkwem onye ahọrọ maka ememme ahụ bụ 35-isi Helio P8, biara na 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa, ha niile nwere ike ịgbasa nchekwa ahụ. A na-enye ike site na batrị 4.000 mAh nke a ga-akwụ ụgwọ site na ọdụ USB-C na-ebu ọnụ ngwa ngwa, ọ bụ ezie na akọwaghị ọsọ ahụ.
Igwefoto anọ na ọtụtụ njikọta
LG na-agbakwunye Flash LED abụọ na kamera azụ anọ, nke kachasị bụ megapixel 48, nke abụọ bụ 5 megapixel ultrawide unit, nke atọ bụ 2 megapixel macro sensor, na nke anọ bụ 2 megapixel omimi sensọ. Oge a, ndekọ a na-aghọ Full HD ma na-enye ọtụtụ usoro ndekọ.
El LG Q52 ahọrọla njikọ kacha ukwuu nke ngwaọrụ n'oge a, onye nrụpụta na-agbakwunye njikọ 4G-LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC na USB-C njikọ iji kwụọ ụgwọ ya. Ihe ntinye akara mkpisiaka na-etinye aka n'akụkụ maka ịmeghe na usoro a bụ gam akporo 10 na akwa oyi akwa nke mbinye aka.
IKIRU 6.6-anụ ọhịa IPS LCD na HD + mkpebi / Oke: 20: 9
Nhazi 35 GHz 8-isi MediaTek Helio P2.3
Ohere TERLỌ N'IME 64 GB - Oghere MicroSD ruo 512 GB
GHARA CAMERAS 48 MP Isi ihe mmetụta / 5 MP Ultra Wide Sensor / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Omimi Sensor / sọrọ ikanam Flash
N'ihu CAMERA 13 MP isi ihe mmetụta
UMUAKA 4.000 mAh na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
Njikọ 4G / Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / USB-C / GPS / NFC
Atụmatụ ndị ọzọ Akụkụ Mkpisiaka Aka Reader / Google Enyemaka Key / MIL-STD-810G
Mkpụrụ na arọ: 165 x 76.7 x 8.4 mm / 184 gram
El LG Q52 batara na South Korea na mbido Silky White na Silky Red agba, ọ bụ ezie na ha na-atụ aro na a ga-enwe nhọrọ agba ọzọ ma emechaa. Q52 dị ugbu a maka ịzụta tupu na weebụsaịtị LG yana n'ọtụtụ ndị na-ere ahịa dị iche iche maka ego nke KRW 330,000 (240 euro iji gbanwee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG Q52 bụ ntinye ọhụụ ọhụrụ na Helio P35 na gam akporo 10
Esi lelee oku vidiyo WhatsApp na TV